ब्लग - Nepali Patrika | नेपाली पत्रिका
सूर्यको भागबन्डा – कसले राख्ने माउ, कसले लिने अण्डा?
२०७७ पुष १९ गते, आईतवार, १०:५६ बजे प्रकाशित
On: २०७७ पुष १९ गते, आईतवार, १०:५६ बजे प्रकाशित
यो बर्वाद कुनै वाद नमिलेर हैन। सबैको एउटै वाद खाओ वाद, नातावाद, कृपावाद, दलाल पूंजीवाद!
अलिकति बौद्धिक र क्षमता भएको ब्यक्तिले जब आफूभन्दा मूर्ख र लहडीलाई काँधमा बोकेर हिँड्छ, तब सोच्नुस् त्यो बोकेर हिड्ने व्यक्तिको भविष्य काँधमा रहेकाले गरेको मुर्खतासँगै सकिन्छ।
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड प्रवृत्ति!
२०७७ पुष ८ गते, बुधबार, ०३:०२ बजे प्रकाशित
On: २०७७ पुष ८ गते, बुधबार, ०३:०२ बजे प्रकाशित
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको विगत कुनै पनि हिसाबमा उल्लेखनीय छैन। वर्तमान राजनीतिक किचलोमा उनको भूमिकामा समर्थन देखिए पनि प्रचण्ड पात्र मात्रै नभएर प्रवृत्ति बन्दैछन्। उनको अस्थिर सोच र आफू जोगिने उपायको खोजी नेकपा र पूर्व एमालेको लागि महंगो पर्नेछ। पछिल्लो गतिरोधविस्तृतमा
सिर्जना बर्देवा, काठमाडाै‌। परिवर्तनका लागि धेरैले ज्यानको बाजी लगाए। तिनकै बलबुतामा मुलुकले गणतन्त्र पायो। संविधानमा न्याय र समानताका दफा कोरिए, छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध नयाँ कानून बन्यो। धेरैले समानता र न्यायको आशा गरे। तर व्यवहारमा लागू हुन सकेन। नारा र कागजमैविस्तृतमा
त्यो पुरानो रेडियो…
२०७७ मंसिर २० गते, शनिबार, ०९:०५ बजे प्रकाशित
On: २०७७ मंसिर २० गते, शनिबार, ०९:०५ बजे प्रकाशित
त्यसो त म कसैको चाकडी गरेर चैत्रको धूपमा पचास रुपैयाँको खादा ओढेर गमक्क गर्धन फुलाउने पत्रकारको कोटीमा कहिले परिनँ। त्यो मेरो कमजोरी थियो र हो पनि। किनकि मेरो तीन पुस्ताले चाकडीको “च” जानेन। म यतिखेर ठोकेर भन्छु, “न मलाई कसैलाईविस्तृतमा
सरगम भट्टराई धेरै दिनदेखि लेख्न मन लागिरहेको थियो यो मास्कको महात्म्य लेखौँ कि मास्कको समाजशास्त्र लेखौँ अथवा मास्कको आत्मकथा लेखौँ कि मास्कको पीडा लेखौँ बड़ो दुबिधामा थिएँ म। अन्त्यमा मास्ककै सेरोफेरोमा रहेर मास्क महात्म्य लेख्ने कोशिश गर्दैछु। देशको राजनीतिबारे लेख्योविस्तृतमा